ROOBKA DAAQSINKA AH WAA WAFFI DILKA AH - SOOSAARKA DALAGGA
Ryegrass Grazing, oo sidoo kale loo yaqaano ryegrass ingiriisiga iyo Chennennial perennial Chaff, waa warshad caleen ah oo ka tirsan caleemaha ubax ee Chaff, taas oo, marka, ka mid ah qoyska of badarka.
Qalabkan geedi-socodka noolaha ah wuxuu ku nool yahay Yurub, Waqooyiga Afrika iyo Galbeedka Aasiya. Mararka qaarkood, haddii aan la yaab lahayn, ryegrass dilka ah waxaa laga heli karaa gobollada Aasiyada Aasiya, oo xaq u leh Galbeedka Siberiya.
Ama, sida ay dadku ugu yeeraan, ryegrass dilka ah waa mid ka mid ah cawska ugu fiican ee ugu caansan ee nooca guga. Inta badan ryegrass Ingiriis waxaa lagu daraa dalagyada miraha sanadlaha, iyo ilaa ubax, waxaa si xamaasad leh u cuneen xoolo kala duwan.
Xayawaanka dabiiciga ah wuxuu ka duwan yahay qaraabadiisa kale qiimaha nafaqada sare: 100 kiilo oo caws oo u dhigma qiyaastii 23 qaybood oo cunto ah, halka caanaha - ilaa 60 qaybood oo quudin ah.
Xayawaanka dabiiciga ah wuxuu ku jiraa agagaaraha qashinka kala duwan 4 ilaa 6 jir, daaqsintuna waxay ku noolaan kartaa ilaa 12 sano. Ilaa sannadka afaraad ee ka soo beero, waxay gaadhay danteeda ku jirta horumarinta. Waxay u dulqaadaneysaa baradho iyo jarid isdaba-joog ah, sidoo kale si dhaqso ah ayuu u soo kabanayaa kadib dhaawac kasta oo farsamo ah.
Preference wuxuu siinayaa hodan, xannibaad leh iyo xajmiga loamy. Taas bedelkeeda, way liidataa carrada oo leh kiimiko sare.
Roobka daaqsinka ah waa warshad cagaaran oo khaas ah oo loogu talagalay quudinta xayawaanno badan oo la iibsaday.
Sidoo kale, ryegrass dilka ah foomamka gaaban iyo caleemo badan oo leh dhaldhalaalaan iyo hindis, caleemo cagaaran, sameynta hoolka quruxda badan ee tayo sare leh. Waxa uu leeyahay nidaam xididaysan oo wanaagsan oo sidaas darteed warshadani waa mid ka mid ah cawska ugu koraya ee cawska.
Geedkani waa mashiin. Sidaa darteed, ma hor istaagi qoyaan xad dhaaf ah, laakiin ma aha warshad abaarta u adkaysata.
Ingiriisiga ryegrass ayaa sidoo kale loo isticmaalaa si loo xoojiyo noocyada kala duwan ee carrada qalalan.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee riegrass daaqsinka ah waa waxsii ugu sareeya. Waa ryegrass dilaacsan oo keenaysa qadar weyn oo caws oo loo isticmaalo in lagu quudiyo xayawaanka. Tilmaamaha ryegrass ee noolaanshaha muddada-dheer waa mid aad u habboon, tan iyo celcelis ahaan, mudada noloshu waa 5-6 sano.
Midnimada ee dhalidda ee raaxada akaannimada tooska ah waxay si toos ah ugu xiran tahay inta uu nool yahay ee hal warshad. Waxaan hore u ogaanay in noocyada noocan ah ee riegrass waa sidoo kale bacriminta aad u fiican iyo daaweynta ciidda, taas, dhab ahaantii, sprouts geedka. Tani waa shardi u ah xaqiiqda ah in beergooyinku ku badan yihiin xaaladaha, laakiin noocyada laftiisa, taas oo gacan ka geysata bacarimis iyo hagaajinta ciidda aagga wax soo saar.
Haddii aan ku hadalno dhijitaal u dhigma, markaa riegrass daaqsigu wuxuu bixiyaa qiyaastii 400 sentar oo cagaar ah hektar. Intaa waxaa dheer, waxay ku siinaysaa qiyaastii 90-100 sentimitir hay ah halkii hektar, taas oo sidoo kale muujinaysa kororka dhirta. Maqaalka koowaad ee geeddi-socodka horumarka iyo dareenka ah ee koritaanka wax soo saarka sanad walba ee ryegrass waa wadarta guud ee miraha. Sidaa daraadeed, sannadka ugu horreeya ka dib beerashada, qiyaastii afar quintal halkii hektarba ayaa dhacaya, iyo ka dib sanadaha labaad iyo seddexaad - qiyaastii lix kiiloomitir halkii hektar ee carrada.
Marka laga soo tago waxsoosaar sarreysa, riegrass daaqa ayaa leh waxyaabo kale oo badan oo wanaagsan:
- qiimaha nafaqada sare iyo heerka sare ee koritaanka ka dib marka la gooyo;
- Waa mid aad u fiican oo lagu daro geedo noocyo kale ah (gaar ahaan cawska);
- waa bacriminta carrada iyo daawada, maadaama ay ka hortagtay nabaad guurka;
- Shuruudaha dhakhso ah ee koriinka wadarta, sanadka labaad ka dib markii ugu horeysay ee beero, cawska beertu wuxuu gaari karaa curogida horumarka.
Ma jiraan wax cillado ah oo muhiim u ah daaqsinka daaqa. Qalab yar oo aan wanaagsaneyn ee horumarinta warshadda waxaa loo aaneyn karaa kaliya iskahorimaadka aan abaarta ahayn. Sidoo kale, warshadu kama horjoogsanayso qoyaan xad dhaaf ah inta lagu jiro xilligeeda Bisaylkiisa oo mustaqbalka dhow laga yaabo inay sii yareeyaan horumarkeeda.
Iyada oo ku xiran nooca abuurka, waxaa jira isbeddello qaar ka mid ah heerarka abuurista. Sidaa darteed, heerka abuurka dalagyada nadiifka ah ee 1 hektar wuxuu noqon doonaa 12-14 kg. Nooca labaad ee beereedka wuxuu ku beeran doonaa geedi-socodka geedka iyo geedo kale. Xaaladdan oo kale, qiyaasta qiyaasta 1 hektar waxay ku kala duwanaan doontaa cabbirka 8 ilaa 10 kg.
Iyadoo lagu saleynayo sicirrada kor ku xusan, oo leh cimil caadi ah oo aan caadi aheyn oo qoyaan iyo abaaro kala duwan, natiijo wanaagsan ayaa la filayaa.
Waa dabiici ah in qofku uusan ka hooseeyn heerkulka kaas oo riegrass daaqa kori doono. Hase ahaatee, qofku wuxuu si gaar ah u saameyn karaa xaaladaha horumarinta dhirta. Heerkulka ugu wanaagsan ee biqilka abuurka ah waa laga bilaabo +2 digrii C ilaa -4 digrii. Saameynta heerkulka waxaa ugu wacan awoodda qof si joogto ah u waraabiyo geedka.
Geedka isku dhafka ah ee ryegrass ayaa ah mid yar, wuxuuna u dhigmaa 2-3 cm, waana midda ugu weyn ee dabiiciga ah ee ryegrass lafteeda, taas oo ah warshad maskaxda ah, in tiro badan oo qoyaan ah looma oggolaan karo, iyo sidoo kale si looga hortago ciidda cawska oo koraya.
Xayawaanka daaqa, inkastoo aan aad u sarreeyn, waxay u baahan tahay xaalado gaar ah oo nolosha iyo horumarka. Inta badan waxay ku xiran tahay habka beereed, sababtoo ah marka la beero ryegrass leh dhirta cagaaran ee kale, waa lagama maarmaan in ay u hoggaansamaan ciribtirka, laakiin waqti isku mid ah hab gaar ah ee beerista, koritaanka iyo horumarinta dhirta lagu beeray isla ciidda.
Jiilaalka ka dib, waa waqtigii saxda ahaa ee lagu beeray ryegrass sanado badan, maadaama ay ciidda ku filan tahay in la qallajiyo, ma jirto abaar iyo carrada ayaa "cusboonaysiin" leh barafka iyo barafka.
Iskudhicelka rabitaanada soo socda waxay keeni karaan in qayb ka mid ah luminta miraha, iyo si aan dhammaystirneyn oo buuxa marka loo barbardhigo meesha loo socdo. Xaaladahan waxaa ka mid ah:
- Seeding waa inuu dhacaa guga hore; ciidda waa in aysan aheyn qallal iyo qiyaas qoyan;
- Rugta Ingiriisku ma qabsan karto miisaanka iyo kuleylka;
- ciidda waa in si dhaqso ah looga shaqeeyaa ka dib jiilaalka iyo baraf baraf ah; qoyaanka waa in lagu hayaa qiyaasta celceliska qiyaasta oo aan loo oggolaanin in ay biyo ku daraan "daadad" miraha dabaqada dilka ah;
- for beerashada waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo digirta iyo Bacriminta fosfateerka, iyo guga hore si ay u soo bandhigaan Bacriminta nitrogen for beerashada ugu horeysay;
- Beerashada waa in la sameeyaa bilowga hore ee ubax, sababtoo ah xaqiiqda ah in ryegrass uu si kedo ah u kaco si xowli ah, sababtuna waa xayawaanka ay si liidata u cuneen.